🥇 ▷ Sharafta 20 Pro waxay heshaa midab kala duwan oo ah nooca khaldan ee Icelandic, kharashkiisuna yahay 3199 yuan ($ 465) ✅
Sharafta 20 Pro waxay heshaa midab kala duwan oo ah nooca khaldan ee Icelandic, kharashkiisuna yahay 3199 yuan ($ 465)
Dhowr bilood ka hor, shirkadda hoose ee Huawei Honor waxay suuqyadeedii gudaha ee Shiinaha ka soo saartay barnaamijka ‘Honor 20’ iyo Honor 20 Pro. Taleefoonnada casriga ee sharafta leh ayaa marki ugu horreysay la sii daayay bishii Maajo munaasabad ka dhacday London.
Shiinaha, taleefanka casriga ah ee “Honor 20 Pro” waxaa lagu sii daayay laba ikhtiyaar midab – Phantom Blue iyo Phantom Black. Maanta, inta lagu gudajiray soo bandhigida Honor 9X ee Shiinaha, shirkaddu waxay ku dhawaaqday ikhtiyaar midab cusub oo loogu talagalay Honor 20 Pro – Icelandic Illusion.
Xulashada midab ee cusub ee Icelandic Illusion ee sharafta leh 20 Pro waxay leedahay hue dahab ah iyo hooska nalka oo casaan ah oo dusha sare ah, kaas oo daboolaya inta badan qeybta dambe, iyo iftiin buluug khafiif ah oo hooseeya.
Sharafta 20 Pro Icelandic Illusion waxaa lagu heli karaa laba nooc: 8 GB oo ah RAM + 128 GB oo ah xusuusta gudaha iyo 8 GB oo ah RAM + 256 GB oo ka mid ah xusuusta gudaha ayaa lagu qiimeeyay 3199 yuan (~ $ 465) iyo 3499 yuan (~ $ 508), siday u kala horreeyaan. Qiimaha ikhtiyaarkan midabka cusub wuxuu la mid yahay kan xulashada midabka ee Phanton Black iyo Phantom Blue.
Sida ku xusan tilmaamaha, taleefanka waxaa ku qalabeysan 6.26 inji All-View Full HD + oo leh fiiro gaar ah oo gooyn, shaashad dhan 2340 x 1080 pixels iyo cabir dhan 19.5: 9. Qeyb ahaan dalool ku yaal shaashadda waxaa ku jira kamarad 32-megapixel selfie ah.
Xiaomi waxay siineysaa 1000 saami dhamaan shaqaalaha kadib markii ay ka dhigtay liiska Fortune 500 Xulashada Tifaftiraha: Xiaomi waxay siisaa 1000 saami dhammaan shaqaalaha, iyagoo ku jira liiska Fortune 500
Xarka hoostiisa, talefannada casriga ah waxaa ku qalabeysan halbeega caloosha u gaarka ah ee loo yaqaan ‘Hisilicon Kirin 980’ oo leh processor-side sideed ah ah. Sidii horeyba loo soo sheegay, taleefanka wuxuu la imaanayaa 8 GB oo RAM ah iyo labo ikhtiyaar oo loogu talagalay xusuusta gudaha – 128 GB iyo 256 GB. Ma jiraan kaararka microSD ee loogu talagalay ballaarinta xusuusta.
Waaxda kamaradda, Maamuusta 20 Pro waxaa ku jira aalado afar kamaradood ah, oo ay ku jiraan 16MP f / 2.2 kamarad weyn, Sony IMX586 kamarado 48-megapixel ugu weyn oo leh firka 1.1, 8MP f / 2.4 muraayadaha telephoto iyo 2-megapixel f / 2.4 camera Macro Waxa kale oo ay la timaadaa iyada oo lagu taageerayo illaa 30x oo ah zoom dijital ah.
Telefonka casriga ah kuma qalabaysan jaakad maqal ah, laakiin waxay taageertaa shaqeynta dhawaaqa 9.1 ee ku wareegsan, kaasoo ka shaqeeya inta badan dhagaha dhegaha iyo dhegaha. Waxay ku shaqeysaa Android 9 Pie oo leh Magic UI-mideysan waxaana ku shaqeeya batteriga 4000 mAh iyadoo lagu taageerayo 22.5 W oo degdeg ah, kaasoo taleefanka ku dallaci kara 50 boqolkiiba 30 daqiiqo.
Shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Apple ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhowdahay inay iibsato meheradda Intel Modem-ka $ 1 bilyan Xiga Sare: Shirkadda Amerikanka Applereported waxay aad ugu dhowdahay inay iibsato ganacsiga modem-ka Intel $ 1 bilyan.